Zixi မှသူမ Emmy အနိုင်ရသော IP Transport Solutions ကိုဆွေးနွေးမည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သူဟာ Emmy-အနိုင်ရအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေး Solutions ဆွေးနွေးဖို့ Zixi
သူဟာ Emmy-အနိုင်ရအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေး Solutions ဆွေးနွေးဖို့ Zixi
, TVBEurope ရဲ့ "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" နှင့် IBC 2019 မှာ CSI မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "အကောင်းဆုံးကွန်ယက် Delivery နည်းပညာ" ဆုအနိုင်ရတဲ့၏ဒေါက်ပေါ်လတ်ဆတ်တဲ့ Zixi, အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်အားကိုး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုအားဖွင့်အဘို့စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အားကစားဗီဒီယို Group ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ရပ်မှာပါဝင်အားဖြင့် IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုသရုပ်ပြဆက်လက်မည် NAB ပြရန် New York ကအောက်တိုဘာလ 14 ၏အပတ်အတွင်းth.
အင်္ဂါနေ့မှာအားကစားဗီဒီယို Group ၏နှစ်ပတ်လည်ပို့ဆောင်ရေးကွန်ဖရ, အောက်တိုဘာလ 15 မှာth3 pm တွင် - 25:, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Zixi ရဲ့ VP အဲရစ် Bolten,4နေ panel ကိုအပေါ် featured လိမ့်မည်။ အဆိုပါ panel ကို, "ပုဂ္ဂလိက vs. ပြည်သူ့: အဆိုပါ IP ကိုဖြည့်ပံ့ပိုးပြည်နယ်နှင့်အင်တာနက်-အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်မှု"အလှူငွေအတွက် IP ကွန်ရက်များ အသုံးပြု. ပြုလုပ်ပေးပါသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အသံလွှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်သစ်ကိုပုံမှန်အဖြစ် IP ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများဦးဆောင်နေကြသည်၏ဘယ်လိုကြီးထွားလာလူကြိုက်များကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ panel ကိုဟားဗတ်တက္ကသိုလ်, LTN ဂလိုဘယ်မှကိုယ်စားလှယ်များ feature မည်, Teradek နှင့်မီဒီယာ Links များ။
At NAB ပြရန် နယူးယောက်, Zixi အဆိုပါချိတ်ဆက်မီဒီယာ IP ကိုပြဇာတ်ရုံထဲမှာနှစ်ခုတင်ပြချက်များပို့ချလိမ့်မည်:
IP ကိုကျော်စကေးမှာဂလိုဘယ်တိုက်ရိုက်လွှ -: အဆိုပါ Zixi ကွန်ယက် Enabled ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 16 တွင်th,4ထံမှ: 30 - 5: 15 pm တွင်, Zixi ရဲ့အဲရစ် Bolten, IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အားသာချက်များနှင့်ရှုပ်ထွေးအပေါ်တစ်ဦးတင်ဆက်မှုပေးမည်ဖြစ်သော Zixi ၏ထူးခြားသောအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအဖြစ်အပါအဝင်အကြောင်းအရာများ Zixi ရဲ့သက်သေ protocol ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလေယာဉ် Zen မာစတာသုံးပြီး Network ကို Enabled တိုက်ရိုက်လွှ linear ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လုံခြုံရေး, အနိမ့်အောင်းနေချိန်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transcoding များ၏အခက်အခဲများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် IP ကွန်ရက်များအနှံ့ hitless failover နှင့် Bond ပေး Zixi ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်၏စက်မှုလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများကျွမ်းကျင်ဖို့ဘယ်လို, စကေးမှာစီး။
အိုင်ပီကွန်ယက်ကျော် low-latency တိုက်ရိုက်ပွဲပံ့ပိုးမှုများ - ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17 တွင်th, 12 ထံမှ: 30 - 1 pm တွင်, ကုန်ပစ္စည်း၏ Zixi ရဲ့ဦးခေါင်း, တိ Baldwin, Zixi ၏ cloud-based နှင့် On-ရဝုဏ် software ကိုပလက်ဖောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများဖွဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦးတင်ပြချက်အားငါပေးမည် HD IP ကိုကျော်နှင့် UHD ဗီဒီယိုက။ သူတို့အားကစားအလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးအသက်ရှင်ဖို့ဆက်စပ်အဖြစ်ဤကိစ္စတွင်လေ့လာမှုအဆိုပါတင်းနစ် Channel ကိုဖွင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ linear ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခု usta-ဆက်နွယ်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ stream Zixi တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတစ်နိုင်ငံလုံးရန်အသုံးပြုခဲ့ပုံ၏တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုဥပမာအပါအဝင် Zixi အသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းခြုံငုံသုံးသပ်ပေးတော်မူမည် ။
နောက်ဆုံးပေါ် Zixi သတင်းအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး zixi.com/news/.
Cooke Optics Anamorphic / i မျက်ကပ်မှန်များသည် Blockbuster ကြီးကြီးကိုကြည့်ရှုရန်မုသာအမွေအနှစ်ကိုယူဆောင်လာသည် - စက်တင်ဘာလ 30, 2020
Pebble Beach Systems သည် VP အရောင်းအသစ်များနှင့်အတူအမေရိကရှိအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုအားဖြည့်ပေးသည် - စက်တင်ဘာလ 30, 2020
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ Show ကိုနယူးယောက် 2019 NAB NAB16 nabshow အားကစားဆိုင်ရာဗီဒီယို Group မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Zixi 2019-10-03
ယခင်: နယူးယောက် NAB: ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ကွန်ရက်ကျော်နယူး 4K ဒီကုဒ်ဒါ, SafeLink ဗီဒီယိုပို့ဆောင်ရေးကမ်းလှမ်း
နောက်တစ်ခု: AGTV ချီလီတီဗီစီးရီးထုတ်လုပ်ရန် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများကိုအသုံးပြု